Warshadaha daaweynta biyaha: astaamaha, daaweynta iyo faa'iidooyinka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Ecology
Biyaha wasakhda ah waxaa laga soo saaraa dhammaan waxqabadyada aadanaha ee ay tahay in la daweeyo. WWTPs waa saldhigyada dhirta daaweynta biyaha wasakhaysan waxayna masuul ka yihiin daaweynta biyahan. Waa biyo ka dhasha waxqabadka aadanaha ee ka yimaada magaalooyinka, warshadaha, beeraha, iwm. Khatar ku ah deegaanka tan iyo markii daadashada iyo daadinta ay sii deyn karto walxaha sunta ah ee kiciya masiibooyinka deegaanka.
Sidaa darteed, waxaan kuu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato dhirta lagu daweeyo biyaha.
0.1 Nidaamyada daaweynta biyaha
1 Daaweynta dhirta bullaacadaha
1.0.1 Daaweynta aasaasiga ah
1.0.2 Daaweynta labaad ee dhirta daaweynta
Nidaamyada daaweynta biyaha
Si biyaha loogu celiyo deegaanka dabiiciga ah, waa inay raacaan taxane daaweyn ah oo ujeedkooda ugu weyni yahay baabi'inta qashinka. Daaweyntu way kala duwan tahay iyadoo kuxiran astaamaha biyaha wasakhda ah iyo halka ay ku dambayn doonto. Waan ognahay in biyaha wasakhda ah laga soo ururiyo tuubooyinka ururiya ee ka dhigaya inay gaadhaan dhirta lagu daweeyo biyaha qashinka ah. Waa halkan meesha lagu daaweynayo daaweyn kala duwan si ay u awoodaan inay daahiriyaan.
Ku dhowaad xilliyada oo dhan, biyuhu waxay sii ahaadaan celcelis ahaan 24-48 saacadood ka hor inta aan lagu soo celin kanaalka. Kanaalkani wuxuu noqon karaa webi, kayd biyo ah ama badda. Dhirta daaweynta waxaa lagu qaadaa daaweynta soo socota:
Daaweynta ka hor: Waxay ka kooban tahay baabi'inta waxyaabaha adag ee ugu waaweyn ee ku jira biyaha, sida ciidda iyo saliidaha. Daahintani waa mid lagama maarmaan u ah inay awoodaan inay ku hagaajiso biyaha nidaamyadooda soo socda.
Daaweynta aasaasiga ah
Daaweynta Sare: Waxaa kaliya loo isticmaalaa kiiska inaad rabto inaad sii nadiifiso biyaha si aad ugu shubto aagagga dabiiciga ee la ilaaliyo. Qiimaha sare ee ay leeyihiin awgood, sida caadiga ah si caadi ah looma sameeyo.
Waxaan dooneynaa inaan sharaxo talaabo talaabo ah maxay yihiin howlaha ugu muhiimsan ee ka dhaca dhirta daaweynta.
Daaweynta dhirta bullaacadaha
Waxay ka kooban tahay qaar ka mid ah geedi socodka-kiimikada jirka ee la adeegsado si loo yareeyo waxa ku jira walxaha la hakiyay ee ku jira biyaha. Badanaa adkaha la joojiyay ee la helay waxay noqon karaan kuwo jilicsan ama sabayn kara. Kuwii la faaruqiyey badanaa waxay gaaraan xagga hoose muddo gaaban ka dib, halka kuwa dambe ay yihiin jajabyo aad u yar oo ay durba ku dhex jiraan biyaha oo aan dul sabayn karin jiifkayga. Si looga takhaluso qaybahaas yaryar, waxaa loo baahan yahay daaweyn kale oo aad u baahi badan.
Hababka qaarkood ee loo isticmaalo daaweynta aasaasiga ah waxaa ka mid ah kuwan soo socda:
Kala daadsanaanta: waa habka ay walxaha dhireedku ugu dhici karaan xagga hoose mahadnaqa ficilka culeyska. Nidaamkan, oo ah mid fudud oo raqiis ah, ilaa 40% adag ee ku jira biyaha waa la tirtiri karaa. Gudaha warshadda daweynta waxaa ku dhex yaal taangiyo loo yaqaan “decanters” waana meesha uu daadku ka dhaco.
Sabayn: Waxay ka kooban tahay ka saarista xumbo, dufanka iyo saliidaha tan iyo, cufnaanta hooseeya awgeed, waxay u muuqdaan inay degaan lakabka biyaha. Nidaamkan sidoo kale waa suurtagal in laga saaro qaybaha leh cufnaanta hoose. Si tan loo sameeyo, waxaa lagama maarmaan ah in lagu duraa goobooyin hawo ah si loo fududeeyo soo bixitaankooda iyo ka saariddooda. Sabeyntaas, ilaa 75% ka mid ah walxaha adag ee la laalo ayaa lagaa saari karaa. Nidaamkani wuxuu ka dhacayaa taangiyada kale ee loo yaqaan "floats air floats".
Dhex-dhexaadinta: waa nidaam ka kooban caadi u ahaanshaha pH. Tan macnaheedu waa in biyaha lagu hagaajiyaa PH inta u dhexeysa 6-8.5. Marka laga hadlayo biyaha wasakhda ah ee aashitada, dhirta daaweynta waa inay jaangooyaan qadarka biraha culus ee lagu daro walxaha alkaline-ka si kor loogu qaado pH-ta biyaha. Taas bedelkeeda, biyaha wasakhda ah ayaa kaarboon laba ogsaydh ka alkali ah ayaa la soo saaray si loo yareeyo pH qiyamka caadiga ah.
Hawlaha kale: haddii aad rabto inaad ku guuleysato sifeyn ballaaran ee biyaha wasakhda ah, farsamooyinka qaar ayaa la adeegsadaa sida isticmaalka haanta qashinka, lagoonnada, miirayaasha cagaaran ama habab kale oo kiimiko ah sida isweydaarsiga ion, yareynta, qiiqa, iwm
Daaweynta labaad ee dhirta daaweynta
Sidii aan horay u soo sheegnay, haddii aan loo baahnayn nadiifin heer sare ah, daaweyntan labaad laguma sameeyo dhirta bullaacadaha. Waxay ka kooban tahay nidaamyo geedi socod bayooloji ah oo looga golleeyahay in gebi ahaanba laga takhaluso arrinta jirku ku jiro. Iyagu waa habsocodyo bayoolaji ah oo bakteeriyada qaar iyo noolaha loo adeegsado in loogu beddelo walxaha dabiiciga biomass-ka gacanta, tamarta, gaasaska iyo biyaha. Faa'iidada ay leedahay daaweyntan dadka kale ayaa ah inay 90% wax ku ool tahay.
In daaweynta labaad ee dhirta daaweynta bulaacada ay u kala soocaan qaar ka mid ah hababka kala duwan ee aerobic iyo anaerobic. Kuwii hore waxay kujiraan joogitaanka oksijiinta kan kalena maqnaanshaha oksijiinta. Aan aragno waxa ay yihiin:
Hawlaha hawada: waxaa lagama maarmaan ah in la soo bandhigo ogsijiinta haamaha ay stamens ka galaan biyaha wasakhda ah. Inta lagu jiro marxaladdan xaalufinta walxaha dabiiciga ayaa dhaca oo biyo iyo kaarboon laba ogsaydh ayaa la siidaayaa. Waxyaabaha Nitrogenous sida ammonia, taas oo ah nooc ka mid ah sunta nitrogen ee aadka u sunta ah, ayaa lagu tirtiray marxaladan. In kasta oo amooniyamku aanu sun ahayn, haddana waa qaab ay dhiqi karto dhirta, markaa waxay sababi kartaa badashada algae iyo nafaqaynta iyaga ka mid ah. Nidaamkan kobcinta nafaqada waxaa loo yaqaannaa eutrophication.
Hawlaha Anaerobic: tan waxaa lagu sameeyaa maqnaanshaha oksijiinta iyo falcelinta khamiirka oo dhaca taas oo walxaha dabiiciga ahi u beddelaan tamar, kaarboon laba ogsaydh iyo gaaska methane.
Waxaan sheegi doonaa qaar ka mid ah daaweynta ka dhacda dhirta daaweynta:
Dhoobo firfircoon Waa daaweyntaas oo lagu sameeyo joogitaanka oksijiinta waxayna ka kooban tahay ku darista maadooyinka maaddada dabiiciga ah ee leh sheyga si loo sifeeyo oksijiinta ay falcelintu dhacdo.
Sariiraha bakteeriyada: Waa geedi socod jimicsi waxayna ku lug leedahay dhigista taakuleynta meesha sheybaar iyo biyo haraaga laga helo. Qaddar yar ayaa lagu daraa si loo ilaaliyo xaaladaha aerobic.
Miirayaasha cagaaran: Waa dalagyo lagu waraabiyo biyo wasakh ah oo awood u leh inay soo nuugaan xeryahooda.
Dheef-shiidka Anaerobic: waxaa lagu fuliyaa taangiyo gebi ahaanba xiran maqnaasha ogsijiin. Halkaan waxaa loo isticmaalaa bakteeriyada soo saarta aashitada iyo methane markay xaalufiyaan maaddada dabiiciga.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad waxbadan ka baran karto dhirta daaweynta iyo astaamahooda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Ecology » Dhirta daaweynta
Warshadaha tamarta nukliyeerka ee Isbaanishka